Oghere Steam mgbe ọrụ
Home » blog » Ụlọ Steam Mgbe Ọrụ
Imega na ịrụ ọrụ bụ akụkụ dị mkpa nke idebe ihe kwesịrị ekwesị ma nọgide na-ahụ ike. Otú ọ dị, mmega ahụ siri ike na mgbe nile nwere ike isi ike, yana ịhapụ gị ahụhụ na ọnyá. Nke a pụtara na, na-emeli, nkwakeghachi nwere ike ịdị mkpa dị ka mmega onwe ya; ka ewere gbasaa arụmọrụ nke mgbake gị, ọ dị mkpa ka a kpụ ọkụrị ozugbo. Ọ bụ ezie na, enwere ọtụtụ ihe dị iche iche ị nwere ike ime na nke a, dị ka iji mgbakwunye, ịhịa aka n'ahụ, na iri ihe oriri ziri ezi, anyị ga-abụ elekwasị anya na uru nke ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ post-worka.
Nke mbụ, iji ebe a na-egwuru egwu na-ebelata esemokwu na ike ọgwụgwụ n'ime ahụ gị; n'akụkụ nke a, ọ na-ebelata ike ọgwụgwụ uche na nchekasị. Ịnọ n'ime ụlọ na-eme ka ahụ gị dị elu na-eme ka arịa ọbara gị dilata (gbasaa). Ndachapu nke arịa ọbara gị na - ebute ọbara na - agbanye mma n'ahụ gị. Nke a, n'aka nke ya, ọkpụkpụ ahụ nwere ọtụtụ ihe ikuku oxygen na nri, na-enyere aka na nrụzi muscular. Ọ na-enyekwara aka n'iwepụ ngwa ngwa ngwa ngwa site n'ikike na-arụ ọrụ nke ọma, yana mkpụrụ ndụ nzaghachi. Mkpụrụ ndụ ọcha ndị a dị mkpa iji belata mkpụrụ ndụ ndị ọzọ na-enweghị ike imebi (na mkpofu ha) mana ha nwere ike imebi mkpụrụ ndụ ahụike ma ọ bụrụ na ha na-anọ maka ogologo oge.
Na mgbakwunye na iwepụ ahụ ọkụ na imeziwanye mgbapụta, iji ugbo ugbo na-eme ka ahụ gị dịkwuo elu. Ọzọ, nke a bụ ihe ebumpụta ụwa siri ike maka ịwelite ahụ gị. Mgbe ịmechara ngosiputa ahụ, ọnụ ọgụgụ nke ahụ gị na-arị elu maka awa ole na ole sochirinụ. Nke a pụtara na, n'ozuzu, ị na-agbanye ume (calorie) ngwa ngwa n'ọnọdụ izu ike karịa ka ị ga-eme. Uche nwere ike ime ka ogologo oge gị metabolism na-anọgide na ọnọdụ a ka njọ. Nke a maximizes ọ dị irè nke mmelite na-emetụta ụbụrụ gị ma bụrụ nke bara uru karịsịa ma ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ ị na-egosipụta bụ ịkwụsị ibu.
Maka ndị gị nke na-arụ ọrụ na oyi na-atụ oyi, karịsịa ihe dị mkpa n'oge a nke afọ, iji ụlọ ntanetị nwere ike inwe ụfọdụ uru ị nwere ike ghara ịtụle. Ụlọ na-eme ka steak na-enyere aka belata nsị ma na-egbochi ụkwara, nsonaazụ ọjọọ nke mmega ahụ a na-anụbeghị na (karịsịa n'oge oyi). Mgbu iwe, ma ọ bụ ihe 'na-ere ọkụ', bụkwa ihe omume nkịtị. Otú ọ dị, n'adịghị ka nkwenkwe a na-ewu ewu na nke a abụghị n'ihi ikuku dị oyi, ọ bụ n'ihi ụda nkwụsị nke dara ogbenye. Iji ụlọ ntanetị na-enye aka belata ihe a na-adịghị mma, na iru ala, mmetụta dị n'akụkụ. Nke a na-agbada na mmiri nke ikuku ụgbọ mmiri, na mmiri nke akpịrị akpọnwụ akpọnwụ na akpịrị. Ihe mgbaàmà ndị a ga-abụ ndị nwere ụkwara ume ọkụ na-ama nke ọma, nke pụtara ịmegharị ihe eji eme njem na-atụ aro.
Ọnụ ụfụ mmiri 'nke kachasị baa uru bụ na ha na-enyere aka na nhazi usoro ahụ gị. Ugbu a, nke a bụ eziokwu, na-eji ụlọ ntanetịpụ agaghị ekpochapụ ahụ gị niile toxins ugbu a. Ụlọ ntanetị ga-enyere aka wepụ ihe ndị na-emepụta ihe (Mpekarị karịa 1%) nke toxins si n'ahụ gị. Otú ọ dị, oge ntanetị na-enyere aka na-eme ka akpụkpọ anụ ahụ dị ọcha, ma mee ka ọ ghara ịdị ọcha. Ichapu bụ otu n'ime ụzọ anụ ahụ gị nke na-ehichapụ ndị na-egbu egbu, n'oge imega ahụ na-eme ka ahụ dị jụụ; n'ihi na a na-amanye ọgwụ ndị dị otú ahụ n'ahụ ahụ, ma na-ewuli elu na akpụkpọ ahụ ka ọ na-ada. Okpomọkụ na iru mmiri nke ebe a na-egwuru egwu anaghị ekwe ka ajirija kpoo, na-emecha ọcha nke akpụkpọ ahụ gị. Nke a na - ebutekwa anụ ahụ nke anụ ahụ, ọ pụkwara inye aka mee ka ahụike ọ bụla ị nwere nwere ike ime.
N'ikpeazụ, iji steam na-ebute hyperthermia site na ịmepụta okpomọkụ gị. Hyperthermia bụ usoro dị irè nke igbu ndị ọ bụla mba ọzọ ma ọ bụ nkuku na nwere ike ịnọ na ahụ gị; n'ihi na ha enweghị ike ịnarị na okpomọkụ ndị a. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị nwere ahụ ọkụ, ahụ gị na-ebuli ọnọdụ okpomọkụ ya iji lụso ọrịa ahụ ọgụ. Anyị emetụlarị nzaghachi autoimmune kpatara mmega ahụ, nke pụtara na ahụ 'na-alụ ọgụ' ka ọ dịrị ike dị ka o kwere mee. Ya mere n'iji uzu ugbua emechaa mgbe ị na-arụ ọrụ ga-ebelata ohere ị ga-esi daa ọrịa, ọ bụ ezie na ọ naghị ewepụ ọnụnọ nke mba niile.
Nke a na-enye Samuel Socorro site na Mmasị nke anụ ahụ. Sam bụ onye ọkachamara ọkachamara na ahụ ike na ahụike ma na-ede ma na-amụ ihe ndị dị ka nke a karịa afọ 10.